Tababar ku aadan Horumarinta Istaraatiijiyada Xogaha Qaranka oo lagu soo gaba gabeeyay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tababar ku aadan Horumarinta Istaraatiijiyada Xogaha Qaranka oo lagu soo gaba gabeeyay Muqdisho “SAWIRRO”
Wasaaradda Qorshaynta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta tababar hal cisho ah oo ku saabsanaa horumarinta Istaraatijiyadda Qaranka u qabatay xubno ka socday Wasaaradaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Tababarkan oo ay Wasaaraddu iska kaashanayeen Bankiga horumarinta Afrika ayaa lagu soo bandhigay sida ugu haboon ee loola socon karo sicirka suuqyada iyo badeecadaha kala duwan, taasoo ay macnaheedu tahay inay Dowladdu gacanta ku hayso xogta Istaraatiijiyadda Dalka.
Agaasimaha Guud ee xogaha Qaranka Wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cumar Daahir ayaa sheegay in ay ku howlanyahiin dhismaha qeybaha kala duwan ee Wasaaradaha Dowladda iyo sidii loogu diyaarin lagaa in ay xogaha Dalka iyaga soo uruuriyaan.
Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Soomaaliyeed ayaa qeyb ka ah dalaallo lagu doonayo in la helo xubno aqoon u leh uruurinta xogaha Qaranka, kuwaas oo ka kala tirsan hay’adaha Dowladda iyo maamul Gobaleedyada dalka ka dhisan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa billowgii sanadkan ku guuleysatay la socodka sicirka suuqyada Dalka iyo qiimaha badeecadaha, taasoo muujineysa sida uu miro dhalka u yahay hindisaha xog uruurinta Qaranka Soomaaliyeed.
Sawir Qaade:- Maxamed Cabdullaahi Maxamed Feereysane
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Daah-furay Kulanka Wadatashiga Siyaasadda Loo Dhanyahay.”Sawirro”
FAALO:- Sahankii Nabadda!